Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Ụgbọ elu Hawaii ahọpụtala ndị isi njikwa ọhụrụ abụọ
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • News • ndị mmadụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
logo nke ụgbọ elu Hawaii. (PRNewsFoto)
Ụgbọ elu Hawaii taa họpụtara Alanna James ka ọ bụrụ onye isi njikwa nke atụmatụ nkwado ya. N'ime ọrụ ọhụrụ a, James ga-eduzi mmemme Environmental, Social and Governance (ESG) n'ofe ụgbọ elu Hawai'i kachasị na nke kacha ogologo oge, na-ahụ maka ebumnuche ya iji nweta ikuku carbon net-zero site na 2050, ọganihu nke ụdị dị iche iche na ntinye ntinye, na ndị ọzọ. nkwado atumatu.
Ụgbọ elu Hawaii họpụtara ndị isi njikwa ọhụrụ nke atụmatụ nkwado na mmekọrịta ndị ọchụnta ego.
Ụgbọ elu Hawaii na-agbasi mbọ ike na-adịgide adịgide na-elekwasị anya na nsogbu mgbanwe ihu igwe.
Ndị Hawaii ekwela nkwa iwepụ ihe ndị sitere na ụgbọ elu mba ụwa karịa ọkwa 2019.
"Nghọta sara mbara nke Alanna banyere ọrụ anyị na ụzọ atụmatụ ya ga-enyere anyị aka mee ngwangwa Pọtụfoliyo na-eto eto nke ọrụ ESG iji nọgide na-eme ka anyị bụrụ ụgbọ elu na-adigide," Avi Mannis, onye isi osote onye isi ala maka ịzụ ahịa na ụgbọ elu Hawaii kwuru.
James abụrụla onye isi njikwa mmekọrịta ndị ọchụnta ego nke Hawaii kemgbe etiti afọ 2019. Ebe ọ bụ na o sonyeere ụgbọ elu na 2011, ọ na-ejide ọnọdụ na atụmatụ na mgbanwe, ego atụmatụ na analysis, na mbụ lekwasịrị anya ụgbọelu mbụ 'Ohana site Hawaiian turboprop ọrụ. Tupu Hawaiian, ọ rụrụ ọrụ na atụmatụ na mmepe azụmaahịa na ụgbọ elu TACA dị na El Salvador. James nwere nzere bachelọ na akụnụba sitere na Dartmouth College, yana nzere masta na nchịkwa azụmahịa site na IESE Business School na Barcelona, ​​​​Spain.
Alanna James, onye isi nchịkwa nke nkwado nkwado
"Enwere m nsọpụrụ ma na-atụ anya ịkwalite ọrụ ESG na-akpali akpali ma na-emetụta nke otu anyị ka anyị na-agbasa azụmahịa anyị na-elekwasị anya na arụmọrụ na nkwado," James kwuru.
Hawaiian na-agbasi mbọ ike na-akwado nkwado ya, dịka ekwuru na ụlọ ọrụ ahụ Akụkọ banyere ụlọ ọrụ Kuleana 2021. Ịkwado mgbanwe ihu igwe ka bụ otu n'ime isi ihe ESG nke Hawaii. Ụgbọ elu ahụ agbaala mbọ iji nweta ikuku ikuku net-zero carbon site na 2050 site na ntinye ego ụgbọ mmiri na-aga n'ihu, iji efe efe na-arụ ọrụ nke ọma, ikuku carbon, na nkwado ụlọ ọrụ maka mgbanwe njikwa ụgbọ elu na mmepe mmanụ ụgbọ elu na-adigide na mmụba. Malite n'afọ a, ndị Hawaii ekwela nkwa ịkwụsịtụ ikuku sitere na ụgbọ elu mba ụwa karịa ọkwa 2019, dịka International Civil Aviation Organisation's Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) siri dị.
Hawaiian kwuputakwara nhọpụta Ashlee Kishimoto, onye isi njikwa ọrụ mmadụ nke Hawaii kemgbe afọ 2018, na onye isi njikwa mmekọrịta ndị na-etinye ego, dị irè taa. Kishimoto, onye chịburu ụzọ ngalaba mmekọrịta ndị ọchụnta ego n'etiti 2013 na 2017, ga-ahụ maka ijikwa nkwurịta okwu Hawaii na ndị na-etinye ego na ndị ọzọ metụtara ego.
Ashlee Kishimoto, onye isi njikwa mmekọrịta ndị ọchụnta ego
Shannon Okinaka, onye isi ndị ọrụ ego na Hawaiian ụgbọ elu kwuru, "Nzụlite akụkọ gbasara ego siri ike nke Ashlee ga-eme ka ndị na-etinye ego nwee echiche doro anya banyere echiche ego anyị ka anyị na-agagharị na mpụta anyị site na ọrịa COVID-19."
Na mgbakwunye na ahụmịhe mmekọrịta nke ndị ọchụnta ego ya, Kishimoto bụ onye ntụzịaka nke mkpesa SEC na nnabata SOX, yana onye isi njikwa nyocha ụlọ ọrụ. O nwetara akara ugo mmụta bachelor na akaụntụ na Mahadum San Francisco.